Sajhasabal.com |गजल : खाली तिम्राे सिउँदाे मैले भर्ने कहिले हाे
प्रज्वल पाैडेल "पि स्क्‍वाएर"
माइतबाट घरतिर सर्ने कहिले हाे ?
खाली तिम्राे सिउँदाे मैले भर्ने कहिले हाे ?
वारिपारी दुई किनारमा बस्‍न सकिन्‍न
जीन्दगीकाे जंगार सँगै तर्ने कहिले हाे ?
यी हातकाे काम इसारा गर्ने मात्रै त हाे
पाइला चाली गन्तव्यमा झर्ने कहिले हाे ?
मठ मन्दिर जान्छाै कति विश्वास गरेर
अक्षता फूलपाति शिरमा छर्ने कहिले हाे ?
भगाएर लैजाउँ भन्दा हुन्न भनेपछि
जन्ती डाेली लिई अाउनु पर्ने कहिले हाे ?
दाजुभाइ अाफन्तजन चासाे गरि हाल्छन्
साेध घरमा हाम्रो बिहे गर्ने कहिले हाे ?
लिखु तामाकाेशी गाउँपालिका -२